AIRTOX Kabaha badbaadada TX22 | AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada TX22
Kuwa aadka u horumarsan Airtox qaabka TX22 waxaa lagu gartaa dhowr astaamood oo super ah, sida lakabka kacaanka ee kacaanka-kacaanka: WHITELAYER® - adag sida birta oo jilicsan sida dharka jikada. Iyadoo WHITELAYER®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad dhulka hoosaad u ah oo ka dhigaysa TX22 marka laga reebo kabaha kale ee amniga ee suuqa aad maanta garan karto.
WHITELAYER® oo la socda Airtox Nidaamka AIR-3.0, wuxuu kabaha badbaadada TX22 ka dhigayaa mid jajaban illaa heer sida kaliya lagu yaqaanno xoogaa hindhisada.
TX22 wuxuu ku qalabaysan yahay fududaanta dusha iyo banaanka UTURN® Nidaamka xargaha lacageed.
Waxa lagu heli karaa hal nooc midab: buluug (midabbo kala duwan oo isku dhafan eeg TX11, TX33 iyo TX44, ee nooca leh xarkaha kabaha ayaa leh muuqaal TX1, TX2 or TX3, ee nooca kabaha dhexe - eeg TX66).
Kuwa aadka u horumarsan Airtox qaabka TX22 waxaa lagu gartaa dhowr astaamood oo super ah, sida lakabka kacaanka ee kacaanka-kacaanka: WHITELAYER® - adag sida bir oo jilicsan ...